Africa n’agha iri isii nke Chimpanzee nyocha
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Africa n’agha iri isii nke Chimpanzee nyocha
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • omenala • Education • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
jane goodall na chimps
Tanzania na mba ndị ọzọ so na mpaghara Ọwụwa Anyanwụ Africa na-eme akara afọ iri isii nke nchekwa chimpanzee, na-edozi ụzọ ọhụrụ maka mmepe njem mpaghara site na nleta nke obodo chimpanzee.
A gụrụ ndị ikwu mmadụ nke kacha nọrọ nso, a na-ahụkarị chimpanze na East na Central Africa na oke oke ugwu na oke ugwu, na-enye nleta na-atọ ụtọ nke ndị njem nleta nwere ike ịhụ omume ha metụtara mmadụ.
Jane Goodall, onye ama ama n’uwa banyere ala primato batara na Tanzania n’etiti onwa Julai 1960 wee tinye oge ya n’ichebe nchekwa umu chimpanzee ma gbaa mbo n’enweghi obi uto maka onodu ahu ike na Gombe, odida anyanwu Tanzania.
N'ime ihe nchọpụta ya mere ka ekpughe na chimpanzees nwere agwa, jiri ngwa ọrụ, nwee agha ma nwee ike iri anụ nke niile na-egosi mmekọrịta chiri anya ha na ụmụ mmadụ.
Ọ bịarutere Ogige Ugwu Gombe ugbu a na Julaị 14, 1960, ka ọ dị afọ iri abụọ na isii, iji bido ịmụrụ akwụkwọ banyere chimpanzees ọhịa. Ọ ghọtara na ọ bụrụ na chiim ga-adị ndụ n'ọdịnihu, ọ ga-akacha mma iji ọnụ ya na-ekwuchitere ha, yana oke ọhịa na ndị na-elekọta ha.
N'ajụjụ ọnụ ya na ụlọ ọrụ mgbasa ozi ụwa na nso nso a, Jane kwuru na ụmụ mmadụ ma ọ bụ ndị mmadụ nwere ọrụ ịnwale ma gbanwee ihe ka ụmụ anụmanụ wee nwee ọdịnihu dị mma.
“Anyị maara ugbu a na ọ bụghị naanị nnukwu enwe, enyí, na whale nwere ọgụgụ isi n'ụzọ dị ịtụnanya. Anyị maara ugbu a na nnụnụ ụfọdụ dị ka ọkpụrụkpụ ọkịta nwere ike, n'ọnọdụ ụfọdụ, nwee ọgụgụ isi karịa ụmụ mmadụ. Ọbụna a zụọla ụfọdụ ụmụ ahụhụ ime ule dị mfe ”, ka o kwuru.
Jane Goodall akọwaala oge dị oke mkpa na ndụ ya mgbe ọ na-ekwu okwu na ogbako na Chicago, na-ekwu na ya rutere na Gombe chimpanzee park dị ka onye nyocha wee hapụ dịka onye na-eme ihe ike.
Ọ haziri ma chịkọta ọgbakọ izizi nke chịkọtara, na nke mbụ ya, ndị nchọpụta chimpanzee sitere na saịtị dị iche iche n'Africa.
Ugbu a, afọ 60, onye ọkà mmụta sayensị, ọkà mmụta ihe omimi, na onye mmume ka na-akwado oke mmụọ maka nchekwa nke ụwa.
N'Africa, Jane Goodall bụ onye ama ama na mba ụwa maka nyocha ọkaibe ya banyere akparamaagwa ọhịa. Mgbalị ya ghọrọ agụụ na ndụ ya niile, na-eduga n'ịgba mbọ sara mbara metụtara oke ọhịa, azụmaahịa ọhịa, ọnyà nke anụmanụ dị ndụ na mbibi ebe obibi.
N’eme emume iri isii nke ihe omumu nke Jane Goodall ji chimpanzee mee nchoputa n’Africa, ndi ochichi Tanzania raara mbo n’oru nche-kwa ndu nke umu anumanu iji hu na ndu ndi chimpanze, bu ndi ikwu anyi.
Dika ihe omumu nke mbu ya, ndi nyocha n’ime otutu ulo oru ndi ozo n’aga niru nyocha nke imebi iwu nke chimpanzee ma meputa ihe ohuru na mpaghara a.
Taa, nyocha Gombe na-enye nghọta miri emi banyere mmetụta, omume, na mmekọrịta mmadụ na ibe anyị. Ogige Ntụrụndụ Gombe bụ otu n'ime ogige ntụrụndụ anụ ọhịa n'Africa, pụrụ iche na obodo chimpanzee ma ọ kwesịrị ileta.